အလှပျက်စေတဲ့ ၀က်ခြံ . . . ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ . . . . | Tomorrow News
» အလှပျက်စေတဲ့ ၀က်ခြံ . . . ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ . . . .
အလှပျက်စေတဲ့ ၀က်ခြံ . . . ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ . . . .
Submitted by Zay Thu on Mon, 03/03/2014 - 17:22
၀က်ခြံ ပေါက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရေပြား အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ဖြစ်ခဲ့ရာ မျက်နှာ အရေပြားနှင့် ပတ်သတ် သည်များကို အောက်ပါ အတိုင်း သတိပေး ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
၀က်ခြံ အများဆုံး ပေါက်တဲ့ အရွယ်
၀က်ခြံ အများဆုံး ပေါက်တဲ့ အရွယ်က (၁၀)ကျော်သက် အရွယ်နဲ့ အသက်(၂၀)ကျော် အရွယ်၊ ကြီးကောင်ဝင်တဲ့ အရွယ်လူကြီး ဖြစ်တဲ့ အရွယ်၊ ဟော်မုန်းဓာတ်များ ပြီး ကြီးထွားတဲ့ အရွယ်မှာ အများဆုံး ပေါက်တယ်။ အသက်(၃၀)ကျော် (၄၀)အထိလည်း ပေါက်တတ်တဲ့သူ ရှိတယ်။
၀က်ခြံပေါက်ခြင်းက မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ ရောဂါမဟုတ်
မျိုးရိုး လိုက်တယ် ဆိုပြီး အတိအကျ မှတ်တမ်းတင် ထားတာတော့ မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဖေ၊ အမေမှာ ၀က်ခြံပေါက်ခဲ့ရင် သားသမီးမှာလည်း ၀က်ခြံပေါက်ဖို့ များတယ်။ အတိအကျ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ ရောဂါလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
၀က်ခြံ မပေါက်အောင် ဘယ်လို နေထိုင်သင့်လဲ
၀က်ခြံပေါက် ကာစ (ဥပမာ) ဆားဝက်ခြံလေးတွေ ထွက်လာစ အချိန်မှာ လက်နဲ့ ကုတ်တာတွေ၊ ဖဲ့တာတွေ၊ ထိုးတာတွေ၊ ဆွတာတွေ၊ မသန့်တဲ့ ဥစ္စာတွေ လိမ်းတာတွေ၊ နောက်ပြီး လိမ်းတယ် ဆိုရင်တော့ ရှိပြီးသား ၀က်ခြံပိုဆိုး လာတတ်ပါတယ်။ အရမ်းပြင်းတဲ့ ခရင်မ်တွေ၊ ဘာတွေ လိမ်းတာတို့၊ အကြောင်း မသိပဲနဲ့ တစ်ခြားဆေးတွေ လိမ်းမိတာတို့ လုပ်လို့တော့ မရဘူး။ ၀က်ခြံ မပေါက်အောင် အဓိက အချက်အနေနဲ့ မျက်နှာ သန့်ရှင်းရေးကို မှန်မှန် လုပ်ပေးဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ၀က်ခြံ ပေါက်တာက အဆီ ထွက်တာများပြီး အဲဒီအဆီက ကပ်ပြီးတော့ ချွေးပေါက်တွေ ပိတ်တာပေါ့။ ချွေးပေါက် ကလည်း အဆီအိတ်ကပဲ ထွက်တာပေါ့။ အဆီထွက်တဲ့ လမ်းကြောင်း ပိတ်ပြီး ၀က်ခြံ ပေါက်တာပါ။ ထွက်လာတဲ့ အဆီကို မှန်မှန် ဖယ်ရှားပေးဖို့ လိုတယ်။ မပိတ်အောင် သန့်ရှင်းပေးဖို့ လိုတယ်။
၀က်ခြံကင်းစင် လှနေချင်ရင်တော့ မျက်နှာကို တစ်နေ့ (၂)ကြိမ် (သို့မဟုတ်) (၃) ကြိမ် သစ်ပေးဖို့ လိုတယ်။ ဆပ်ပြာအပျော့နဲ့ ပုံမှန်သစ် ပေးဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်က ဆားဝက်ခြံပေါက်တတ်တယ် ဆိုရင်တော့ ဆားဝက်ခြံပေါက်တယ် ဆိုတာ ချွေးပေါက် ထိပ်လေးတွေ ပိတ်သွားလို့ ချွေးပေါက်ထိပ် မပိတ်အောင် လိမ်းဆေး ပျော့ပျော့လေး တစ်ခုလောက်ကို ခံပြီး လိမ်းပေးရမယ်။ ကိုယ်လိမ်းတဲ့ မိတ်ကပ်တွေ၊ Skin Careတွေ သုံးတဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ အားလုံး အဆီပါတာတွေ၊ အဆီများ တာတွေ သုံးပေးလို့ မရဘူး။ အရမ်းထူတဲ့ မိတ်ကပ်မျိုးတွေ သုံးလို့ မရဘူး။ ၀က်ခြံပေါက်သူတွေ အတွက် သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးတွေကို သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆေးဆပ်ပြာလို ဟာမျိုးလေး တွေလည်း သုံးလို့ ရပါတယ်။ နေ့စဉ် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ညရောက်ရင် မျက်နှာသစ်ရုံ အပြင် မိတ်ကပ် ဖျက်ဆေးကိုပါ သုံးသင့်ပါတယ်။ ချွေးပေါက် အရမ်းကို ပိတ်စေတဲ့ အလှပြင် ပစ္စည်းတွေကို ၀က်ခြံပေါက်သူတွေ အနေနဲ့ ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ အဆီ အခြေခံတဲ့ ပစ္စည်းထက် ရေအခြေခံတဲ့ ပစ္စည်း မျိုးကို သုံးသင့်ပါတယ်။ သဘာဝပစ္စည်းပဲဖြစ်စေ၊ ဓာတုဗေဒ နဲ့ ဖော်စပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းပဲဖြစ်စေ မပျင်းဘူး။ ၀က်ခြံ မပေါက်ဘူး သေချာလည်း စမ်းသပ်မှု လုပ်ထားတယ်၊ လူသိများတယ်၊ ကိုယ်နဲ့လည်း အဆင်ပြေမယ့် ပစ္စည်းမျိုးကို သုံးသင့်ပါတယ်။
၀က်ခြံပေါက်သူတွေ ဘယ်လို စားသောက်ရမလဲ
အစား အသောက်နဲ့ ၀က်ခြံနဲ့ ယေဘုယျ မပတ်သက်ဘူးလို့ ပြောလို့ ရတယ်။ တစ်ချို့တွေက အခုနောက်ပိုင်း အချိုစားတာ အရမ်းများတယ် ဆိုရင် ၀က်ခြံ နည်းနည်း ပိုထွက်တယ်လို့ လေ့လာမှု အချို့က ဆိုတယ်။ ၀က်ခြံပေါက်နေသူ တစ်ယောက်က အစားအသောက် စားတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ခန္ဓာ အတွက် ကျန်းမာ မျှတတဲ့ အစာ အာဟာရ ပုံမှန်အတိုင်း စားလို့ရပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်ရင် စိတ်ဖိစီးမှုများတယ်။ စိတ်ဖိစီး မှုများရင် Stress ဟော်မုန်းဆိုတာ ထွက်တယ်။ အဲStress ဟော်မုန်းက အဆီအိပ်တွေကို နိုးဆွတယ်။ အဆီအိတ် တွေကနေ ၀က်ခြံပေါက်တယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု များရင်လည်း ၀က်ခြံပေါက်တယ် အိပ်ရေးပျက်ရင်လည်း ၀က်ခြံပေါက်တယ်။ တစ် ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့ မတူဘူးလေ။
၀က်ခြံပေါက်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ
၀က်ခြံကို တတ်နိုင်သလောက် ဆရာဝန်တွေက မညှစ်ဖို့ ညွှန်ကြားတယ်။ ညှစ်တယ်ဆို ၀က်ခြံ အလုံးကြီးက ပျောက်သွားတဲ့ အတွက် လောလောဆယ်တော့ ပျောက်တယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ထင်လိုက်ရတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ အတွက် အပြင်ကို ထွက်သွားသလို အဲဒီ ၀က်ခြံလုံး ထဲမှာရှိတဲ့ မသန့်တဲ့ ဆဲလ်တွေ၊ ပိုးတွေ၊ ပြည်တွေ အဲဒါတွေက အတွင်းထဲကိုလည်း တစ်ချို့ဝင် သွားတယ်။ အဲဒီဝင် သွားတဲ့ ဟာတွေက တစ်ချို့ကျရင် အသစ်ပြန် ပေါက်လာနိုင်တယ် နောက်ပြီး ညှစ်ပြီးသား အဖုကလည်း အပေါ်ယံ အနာဖေးကွာ သွားရင် အမာရွတ် ကျန်တယ်။ အခန့် မသင့်လို့ ညှစ်တဲ့ လက်က မသန့်ရင် ပိုးတွေဘာတွေ ထပ်ဝင်ပြီး ရောင်ရမ်းတာတို့ ၊ ပိုးကူး စက်တာ တို့ထပ် ဖြစ်တတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ပါးစပ် အပေါ်ဘက်၊ နှာခေါင်း တစ်ဝိုက်၊ နှာရိုး တစ်ဝိုက် နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံး အောက်ဘက်၊ ပါးစပ် အပေါ်ဘက် အလည်ပိုင်း နေရာက နှာခေါင်းက အမြှေးပါးတွေက တစ်ဆင့် ဦးနှောက်ကို တိုက်ရိုက်သွားတာ။ အဲနေရာ တစ်ဝိုက်မှာ ၀က်ခြံပေါက် နေတယ် ပြည်တွေ တည်နေတယ်။ ပြည်တည်တယ် ဆိုတာ အသားအရေ ပျက်စီးနေတာ။ ပိုးတွေဝင်နေလို့ ညှစ်လိုက်ရင် အဲဒီပိုးတွေ အပြင်ကို ထွက်သလိုမျိုး အတွင်းကိုလည်း ၀င်သွားတယ်။ ၀င်သွားတဲ့ အခါ နှာခေါင်းက အနံ့ခံတဲ့ အာရုံကြောလို နေရာက တစ်ဆင့် ဦးနှောက်ထဲကို တိုက်ရိုက် ၀င်သွားလို့ ရတယ်။ အဲအခါကျရင် ဦးနှောက်ထဲကို ပိုးပျံ့နှံ့ပြီး သွေးဆိပ်တက်ပြီး သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဝက်ခြံ အများဆုံး ပိုပေါက်လဲ
ဆားဝက်ခြံ၊ ရောင်ရမ်းတဲ့ ၀က်ခြံ၊ ၀က်ခြံ အပြင်းစား ၀က်ခြံဆိုပြီး (၃)မျိုး ရှိတယ်။ ဆားဝက်ခြံက ရောင်ရမ်းမှု မရှိဘူး၊ အဖု သေးသေးလေးတွေ၊ အမဲစက် သေးသေးလေးတွေ၊ တစ်ချို့က အဖြူရောင် အလုံးလေးတွေ အဲတာကို ဆားဝက်ခြံလို့ ခေါ်တယ်။ ဆားဝက်ခြံ ကနေပြီး အနီရောင် အဖုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အဲမှာမှ ပိုးဝင်ရင် ပြည်တယ်တဲ့ ၀က်ခြံ ဖြစ်လာတယ်။ အဲတာဆို ပြည်ဖုတွေ ဘာတွေ တွေ့ရတယ်။ အဲလို ၀က်ခြံမျိုးကို ရောင်ရမ်းတဲ့ ၀က်ခြံလို့ ခေါ်တယ်။ အပြင်းစား ၀က်ခြံက မျက်နှာ တစ်ခုလုံး မှာလည်း ဆားဝက်ခြံ တွေရော၊ ရောင်ရမ်းတာ တွေရော၊ ပြည်ဖုတွေရော၊ အရည်တွေထွက် နေရာရော မျက်နှာတွင် မကဘူး ရင်ဘတ်တွေ ကျောတွေမှာ အထိပါ ၀က်ခြံ ပြင်းပြင်းတွေ ပေါက် နေတာကို ၀က်ခြံ အပြင်းစား မျိုးလို့ခေါ်တယ်။ လူအများစုက ဆားဝက်ခြံရယ်၊ နည်းရောင်ရမ်းတဲ့ ၀က်ခြံရယ်ပေါင်း ပြီးပေါက်တာ များတယ်။